ऋषि धमला पत्नीलार्ई नायिका बनाउन खोज्दा भए आफै टाट ! यसरी उड्यो धमलाको करोडौं ! – Medianp
बुधबार, ११, बैशाख, २०७६
ऋषि धमला पत्नीलार्ई नायिका बनाउन खोज्दा भए आफै टाट ! यसरी उड्यो धमलाको करोडौं !
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५१२:०८
काठमाडौँ । चलचित्र क्षेत्रलार्ई उद्योग र व्यापार व्यवसायको रूपमा लिने गरीन्छ । तर, नेपालमा कतिपयले चलचित्र निर्माणलार्ई रहर र सोखको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफन्तलार्ई कलाकार बनाउन नायक नायिका बनाउन निर्देशक बनाउन चलचित्रमा प्रवेश गराउनका लागि लगानी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले आफ्नी पत्नीलार्ई नायिका बनाउन चलचित्रमा लगानी गरेको देखियो ।
पत्रकार धमलाले आफ्नी पत्नी एलिजा धमलालार्ई नायिका बनाउन करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी चलचित्र अनुरागको निर्माण गरे । तर, चलचित्र व्यापारको हिसाबले असफल भयो । उक्त चलचित्र सिनेमा हलमा कहिले लाग्यो, कहिले बाहिरियो भन्नेसम्म दर्शकहरूले थाहा पाइएनन् । नायिका धमला पनि चलचित्र अनुरागपछि अरू चलचित्रमा देखा परेकी छैनन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्ना पत्नीका लागि आफन्तका लागि चलचित्रमा लगानी गर्ने पत्रकार ऋषि धमाला मात्र छैनन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता धेरै निर्माताहरू छन् ।
विगत ४० को दशकका चर्चित नायक भुवन केसीले पनि आफ्नी पत्नी सुष्मिता केसीलार्ई नायिका बनाउन चलचित्र निर्माण गरेका थिए । नायक भुवन केसीले चलचित्र करोडपति निर्माण गरी आफ्नी पत्नी सुष्मिता केसीलार्ई नायिकामा डेब्यु गराएका थिए । नायिका सुष्मिता केसीलार्ई आफ्नो होम प्रडक्सनको चलचित्रमा मात्र अभिनय गर्ने नायिका भनेर पनि त्यसवेला चर्चा चल्ने गरेको थियो ।
विगत चालिसको दशकको लोकप्रिय एक्सन नायकको रूपमा चर्चित नायक शिव श्रेष्ठले पनि अफ्ना छोरा शक्ति श्रेष्ठलार्ई नायक बनाउन चलचित्रमा लगानी गरेका थिए । त्यसैगरी, विगत कि चर्चित नायिका निर्माता निर्देशक झरना थापाले पनि आफ्नी छोरी रेहाना थापालार्ई नायिका बनाउन चलचित्र ए मेरो हजर ३ को निर्माण गरेकी छन् । त्यसैगरी, हास्य कलाकार, टेलिभिनमा राता मकै उपनामले चर्चित कलाकार किरण केसीले पनि आफ्नो छोरा सुदन केसीलार्ई निर्देशक बनाउन चलचित्र दाल–भात–तरकारीको निर्माण गरे । त्यसो त नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभई बलिउड र हलिउड नातावादमा नै चलेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
पछिल्लो समयमा मात्र नभई विगतमा पनि आफन्तका लागि चलचित्रमा लगानी नगरेका होइनन् । विगत चालिसको दशकमा नै आफ्ना छोरा विजय लामालार्ई नायक बनाउन हेम लामाले चलचित्र आदर्श नारी निर्माण तथा निर्देशन गरेका थिए । त्यसवेला नायक विजय लामालार्ई बाबुले बनाएको चलचित्रमा नायक भएको भनेर टिप्पणी गरीन्थ्यो । नेपाली चलचित्र निर्माण हुन थालेको पनि पाँच दशक भइसक्यो अहिलेसम्म पनि यस्तै प्रवृतिले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।
आफन्तद्वारा प्रवेश गराइएका थप्रै कलाकारहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा २ दशकसम्म एकछत्र राज गरेका राजेश हमाललार्ई पनि मामा दीपक रायमाझीले सर्वप्रथम नायक बनाएका थिए । रायमाझीले चलचित्र युगदेखि युगसम्ममा राजेश हमाललाई नायकमा डेब्यु गराएका थिए । त्यसैगरी, दीपक रायमाझीले नै आफ्ना अर्का भाञ्जा किरणप्रताप केसीलार्ई चलचित्र प्रियसीको नायकमा डेब्यु गराएका थिए । किरणप्रताप केसी भने चलचित्रमा सफल हुन सकेनन् ।
नायक गजिट विष्टले पनि आफ्ना आठ वर्षका छोरा सौगाद विष्टलाई निर्देशक बनाउन चलचित्र निर्माण गरेका थिए । त्यसैगरी, आफ्ना भतिजा आर्यन अधिकारिलार्ई नायक बनाउन निर्देशक आकाश अधिकारीले चलचित्र निर्माण निर्देशन गरेका थिए । विगतमा थुप्रै चलचित्र निमाण गरीसकेका निर्माता शेखर कोइरालाले पनि आफ्नो छोरा संयोग कोइरालालार्ई चलचित्रको नायकमा डेब्यु गराएका थिए । त्यसो त आफैले लगानी गरी चलचित्रमा नायकक बनेकाहरू पनि नभएका होइनन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा
आफ्नी छोरीलाई नायिका बनाउन सुशीला रायमाझीले खलनायक पवन मैनालीसँग मिलेर चलचित्र निर्माण गरेकी थिइन् । उनले चलचित्र पिँजडामा आफ्नी छोरी प्रसिद्धिका रायमाझीलाई नायिकामा डेब्यु गरेकी थिइन् । नायिका प्रसिद्धिका रायमाझी पिँजडापछि चलचित्र धनवानमा नायिका भएर अभिनय गरेपछि चलचित्र क्षेत्रबाट नै हराइन् । आफन्तले निर्माण गरेको चलचित्रमा अभिनय गरेका र आफन्तले लगानी गरी चलचित्रमा प्रवेश पाएका धेरैजसो कलाकारहरूले चलचित्रमा निरन्तरता भने दिन सकेका छैनन् ।
यस्ता धेरैजसो कलाकारहरू एक २ चलचित्रमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ । आफन्तले चलचित्रमा कलाकार बनाएका कलाकारहरूमा चलचित्र कस्तुरीका नायक अजय शेखर, चलचित्र आँधीबेरीका नायक विनोद खरेल, चलचित्र १६ वर्षे जोवनकी नायिका ईश्वरी प्रधान, चलचित्र सक्कली नक्कलकी नायिका नूतन प्रधान, चलचित्र लाहुरेको नायक श्रवण घिमिरे, चलचित्र समयके नायक बिकी मल्ल, चलचित्र नथिंग इम्पोसिबलका नायक जर्जी खड्गी, चलचित्र के भो लौन नि कि नायिका अनुपमा प्रसाईं, कोइराला चलचित्र टिचरकी नायिका सलिना बस्नेत, चलचित्र सो सिम्पलकी नायिका भावना रेग्मी आदि छन् । उनीहरू अहिले हराइसकेका छन् ।
आफन्त हुनेहरूले सजिलै चलचित्रमा प्रवेश पाउन सक्छन् । चलचित्र निर्माण निर्देशन गरिरहेका आफन्त हुनेहरूका लागि चलचित्रमा प्रवेश गर्न त्यति गाह्रो छैन । तर, आफन्त नहुनेहरूका लागि भने आफूसँग प्रतिभा सन्दरता अभिनय क्षमता तालिम भए पनि पनि चलचित्रमा प्रवेश गर्नका लागि सघर्ष गर्नपर्ने हुन्छ । यसकारणले पनि चलचित्रमा प्रवेश गर्नका लागि आफैले लगानी गर्ने गरीएको होला । चलचित्रमा आफन्तहरू नहुने र चलचित्रमा लगानी गर्न नसक्नेहरूका लागि त चलचित्रमा नायिका बन्नका लागि निर्माता निर्देशकहरूसँग सम्झौता गर्नपर्छ भन्ने टिप्पणी पनि चलचित्र क्षेत्रमा हुनेगरेका छन् ।
यस्ता चर्चा कलिउडमा मात्र नभई बलिउड हलिउडमा पनि हुनेगरेका छन् । सबैजसो नव प्रवेशी नायिकाहरूले आफू चलचित्रमा नायिका बन्नका लागि अडिसन दिएर अडिसन पास गरेरै नायिका बनेको भनेर मिडियाहरूमा गफ दिन्छन् । त्यसो त नेपालमा चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै नभई हरेक क्षेत्रमा नातावाद कायमै छ । तर, चलचित्र क्षेत्रमा र राजनितिमा नातावादले जरा नै गाडेको छ । राजनीतिमा पनि नेताहरू आफ्ना पत्नी, छोराछोरी भाइ–बुहारी, ज्वाइँ सालासाली सबैलाई मन्त्री सांसद मेयर बनाउन पट्टि लागेका हुन्छन् । चलचित्र क्षेत्रमा आफन्त हुनेहरूले त्यसको लाभ लिन नहुने, आफन्तलार्ई कलाकार बनाउन चलचित्रमा लगानी गर्न हुँदैन र लगानी गरी कलाकार बन्न हुन्न भन्ने पनि छैन । तर पनि पनि चलचित्रमा कलाकार बन्नको लागि आधारभूत तालिम प्रतिभा सुन्दरता, अभिनय क्षमता पनि आवश्यक पर्दछ ।
यो लेख सौर्य दैनिकको लागि नरेन्द्रमान श्रेष्ठले लेख्नु भएको हो ।
बाग्मती नदीबाट उत्पादित २२ मेगावाट जोडियो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा
जान्नुहोस् ! यी बानी भएका पत्नीले दिन्छन्, पतिलाई हर समय खुसी
आज १४औं लोकतन्त्र दिवस, राजतन्त्र हारेको दिन, तर अहिलेसम्म जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन्
यी ३ राशी भएका पतिहरु महिलाका लागी सबैभन्दा खराब ! हेर्नुस् कुन कुन हुन् ?
सगरमाथाको चुचुरोबाट पर्यटन जागरणको उद्घोष ,१४ औँ पटक सगरमाथा चढ्दै फुर्वा
आइफल टावर अगाडि संजोग कोइरालालाई नायिका वर्षा राउतको ‘किस’, देखिए रोमान्टिक (तस्बिरहरू)
बलिउडका यी ३ कलाकार जसको छोरीले राम्ररी घरजम नगरेपछि आफै पाल्न बाध्य छन्
भद्रगोलका जयन्तेको सुन्दर परिवार हेर्नुहोस् (तस्वीर सहित)
अनमोलको फण्डामा सलिनमानको तमासा ! फिल्म हेर्नका लागि भन्दा पनि फोटो खिच्नेको भीड !
नायक आर्यन सिग्देलको छोराको नाम आयान्स, सपनाले गरिन् सार्वजनिक
बधाई छ ! कोरियोग्राफर तथा निर्देशक रेनशाले गरिन् प्रज्वलसँग इन्गेजमेन्ट
राष्ट्रपति भण्डारीभन्दा केही समयअघि नै बेइजिङ उडे माधव नेपाल, एउटै सम्मेलनमा जान किन फरक फरक उडान ?
सलमानविनै सुरु भयो तेरे नाम–२
कागतीको प्रयोगले यसरी हटाउनुहोस् अनुहारमा भएको डन्डीफोर र दाग
डडेल्धुरा बस दुर्घटनाको अपडेट : पाँचको मृत्यु, ३४ घाइते
नेयमार भित्र्याउँदै म्यानचेस्टर सिटी, बदलामा पिएसजीलाई अग्यूरो दिने
आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता ऐतिहासिक रुपमा आज सम्पन्न हुदैँ
चितवनमा राजश्वको अधिकांश हिस्सा मदिराले धान्दै
सत्य घटना : प्रेमिकाको ट्याटु खोप्दा एचआईभी, जो वीर अस्पतालमा जीवनसँग अन्तिम लडाइँ लड्दैछन्
प्रवासी एक परिवारले विद्यालयलाई पाँच लाख आर्थिक सहयोग
संरक्षणमा कसैको ध्यान नपुग्दा मगर सङ्ग्राहलय बन्द हुने अवस्थामा
श्रीलंका घुम्न पुगेका विश्वका अरबपतिका छोराछोरीको बम विस्फोटमा परि निधन, सेयर गरेको तस्वीर भयो भाइरल